अर्धाङ्गिनी र सिपाही
नेपाली पब्लिक शनिबार, माघ १९, २०७५
शान्तिसेनाको सदस्य भएर लेबनान गएको वीरबहादुर जिउँदै फर्केको देखेर बाटोमा भेट भएका श्यामे, सुन्दरे, हरि दाइ— सबै खुसी भए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी खुसीचाहिँ वीरबहादुरकी आमा र श्रीमती भए। ऊ गाउँ फर्कने कुरो एक हप्ताअघि सहरबाट फर्केको सूर्जेले भन्न आइसकेको थियो। त्यसैले अलिअलि खुसी त पहिल्यै भइसकेका थिए तर साक्षात् अगाडि देख्दाखेरिको खुसी— त्यसको परिणामस्वरूप सासू–बुहारी दुवैका आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो। वीरबहादुरले आफ्नी आमाको खुट्टा ढोग्यो निधार टेकेर। उसकी स्वास्नीले पनि वीरबहादुरको गोडा ढोगी। थाकेकोले पिँढीमै थचक्क बसेर वीरबहादुरले टोपी फुकाल्यो र आमालाई सोध्यो —“सञ्चै हुनुहुन्छ आमा?” तर, आमाले केही जबाफ नदिई उल्टो प्रश्न गरी —“अब त लडाइँमा जानु पर्दैन होला नि, बाबू?” “अँ, अब त पठाए पनि नजानू,” स्वास्नीले थपी। कति आत्मीय संसारमा आइयो —वीरबहादुरलाई व्यथित बनायो। आमा र स्वास्नी —संसारमा यी दुईले जति माया अरू कसैले पनि गर्दैनन्। आजसम्म अरू कसैले नभनेको कुरा भने यिनीहरूले —“अब त जान पर्दैन होला नि लडाइँ खेल्न? नजानू।” सँगसँगै हिँडेको भरिया बल्ल आइपुग्यो र भारी बिसायो। सामान थुप्रै थिए। भारी बिसाएर भरियाले लामो सास फेर्‍यो। टोपी फुकाल्यो र टोपीले नै अनुहार पुछ्यो— “खोई, पानी खाऊँ न आमै !” बूढीले बुहारीतिर हेरी। बुहारी भित्र गई पानी लिन। बूढीले भरियालाई सोधी— “बाबूको घर कहाँ नि ?” “तीँ तल हो फेदीमा।” बुहारीले पानी लेराई। भरियाले पानी पियो, आफ्नो ज्याला लियो र नमस्ते गर्दै ओर्ल्यो तल फेदीतिर। “छोरालाई दूध तताइदे न बुहारी! तात्तातो दूध पियो भने थकाइ मेटिन्छ नि!” “अनि मेरो पुन्टे खोई त आमा?” “मामाघर गएको छ बाबू त्यो त। म सुदर्शनलाई लिन पठाइदिन्छु आजै। भोलि त ल्याइहाल्छ नि!”
पँधेरा जाँदा, गोठालो जाँदा जहिले पनि बाटोभरि जिस्क्याइरहन्थ्यो प्रधानको छोरो। एक दिन स्याउलापात टिप्न वनमा जाँदा त समाई पनि हाल्यो पाखुरामा र त्यहीँ भुइँमै सुतायो मोराले। त्यसपछि बाटो खुलेजस्तो भयो। प्रायजसो वनमा आउन थाल्यो, एकान्तमा। पछि झ्यालको बाटोबाट घरको कोठाभित्र पनि पस्न थाल्यो।
पुन्टे भनेको वीरबहादुरको छोरोको नाम हो। पाँच वर्षको भइसकेको छ। जहिले पनि आफ्नी स्वास्नीबाट टाढा सहरमा रहने वीरेले कसरी छोरा जन्मायो, यो कुरा वीरेकी स्वास्नीलाई बाहेक अरूलाई थाहा छैन। तर, वीरेलाई के थाहा छ भने —छ वर्षअघि दशैँमा एकपटक ऊ गाउँ आएको थियो। त्यसपछि अर्को वर्ष स्वास्नीले छोरो जन्माएको सुनेर सहर बसेर वीरे खुसी भएको थियो। खुसी भएर गाउँ आएको थियो र पुन्टेलाई हेरेको थियो। कत्रो भयो होला त्यो अहिले? कस्तो भयो होला त्यो अहिले? “जाऊँ जाऊँ भित्र जाऊँ। यसो पल्टी आराम गर्। दूध खा तात्तातो।” आमाले छोरालाई स्नेहपूर्वक भनी। छोरो घरभित्र गयो। आमा पनि गई र बुहारीले एक–एक गर्दै सबै सामान लगी। छालाको ठूलो बाकस, त्यसपछि अलि सानो बाकस, झोला अनि गुन्टाजस्तै लगी। कपडाको पोको— सबै माथि मटानमा गए। वीरे लुसुक्क ढल्क्यो गुन्द्रीमा। बुहारी अनि दूध तताउन चूलोतिर लागी। एकछिनपछि बुहारीले तातो दूध गिलासमा राखेर लेराई। तातो बाक्लो दूध पिएपछि वीरे अलि तङ्ग्रियो। भन्यो —“सहरमा त यस्तो शुद्ध दूध खान पाइँदैन। मेसिनले बनाएको दूध मात्र खानुपर्छ। आहा! गाईको दूध त क्या मीठो !” त्यसपछि वीर पलेँटी कसेर बस्यो र बाकस खोल्यो। “यो आमालाई” भन्दै बाकसबाट एउटा बाक्लो ऊनी स्वेटर झिक्यो उसले। आमा दङ्ग परी। “यो पनि आमालाई।” अर्को खास्टो निकाल्यो। आमा झन् दङ्ग परी— “यो कहाँबाट, लडाइँ गर्न गएको ठाउँबाट ल्याएको हो?” “त्यो ठाउँबाट त होइन, बाटोमा पर्ने ठाउँबाट ल्याएको हुँ।” “आऽ केलाई ल्याउनुपर्थ्यो त?” भन्न त वीरबहादुरले भन्यो ‘बाटोमा पर्ने ठाउँबाट ल्याएको हुँ’ भनेर तर विदेशबाट चाहिँ होइन। विदेशबाट ल्याएका सामानहरू उसले काठमाडौँका पसलहरूमा लगेर बेचेको र त्यही पैसाबाट काठमाडौँका सस्ता सामानहरू किनेर ल्याएको कुरो कसलाई थाहा छ र? विदेशबाट ल्याएको त ऊसँग खाली एउटा सुनको पातलो सिक्रीमात्र बाँकी छ। त्यो उसले आफ्नी स्वास्नीलाई दिन भनी खल्तीमा राखेको छ। विचार गरेको थियो —‘उसकी स्वास्नी कति जाती छे। सासूको हेरविचार गरी एक्लै बस्न सकेकी छे गाउँमा। कहिल्यै कुनै किसिमको सिकायत गर्दिन ऊ। त्यस्तीलाई सुनको गहनाजस्तो मूल्यवान् वस्तु लग्नु नै राम्रो हुनेछ।’ वीरबहादुरले अनायासै काठमाडौँका वेश्याहरू सम्झ्यो, कतिसँग सुतिसकेको छ ऊ। यो बिचरी स्वास्नीलाई के थाहा? यसो साथीहरू जम्मा भएर मिलाउँथे केही वेश्याहरू। अनि साथीको डेरामा रमाइलो गर्थे। रमाइलो यस अर्थमा कि सिपाहीको नीरसलाग्दो जिन्दगीबाट अलि पर गएर रक्सी पिउँथे, सिपाहीको पट्टाइलाग्दो जिन्दगीबाट अलि पर गएर वेश्या नङ्ग्याउँथे र अँगालो मार्थे। युद्धको विभीषिकाबाट फुत्केर अचानक काठमाडौँ ओर्लंदा त्यस्तो रमाइलो धेरै गरेको थियो उसले। ‘यस्तो रमाइलो उसकी स्वास्नीले के भोगेकी होली? बिचरी! जहिले लोग्ने आयो गाउँमा, अनि मात्र सायद ऊ यस्तो रमाइलो गर्ने मौका पाउँछे। हेर न आज पनि कति रसिलो आँखा लिएर मलाई हेर्दै छे। छ वर्ष भयो लोग्ने नभेटेको, यति पतिव्रता स्त्रीलाई मचाहिँ पथभ्रष्ट भएर धोका दिँदै छु!’ सोचेर वीरबहादुर थक्कथक्क भयो। ‘यस्तो सोझो इमानदार लोग्नेलाई हरे! म धोका दिँदै छु।’ —साँझ पर्दै आएपछि चूलोमा भात पकाउँदै सिपाहीकी अर्धाङ्गिनीले पनि यस्तै सोची। ‘लोग्नेले आफ्नो तिर्खा कसरी दबाएर राखेको होला। यति धेरै वर्ष भेट हुँदैन आफ्नी स्वास्नीसँग। मलाई कस्तो इमानदार भनी सोचिराखेको होला उसले। मलाई गाउँको प्रधानको छोरोले बिटुलो बनाइसकेको कुरा उसलाई के थाहा?’ पँधेरा जाँदा, गोठालो जाँदा जहिले पनि बाटोभरि जिस्क्याइरहन्थ्यो प्रधानको छोरो। एक दिन स्याउलापात टिप्न वनमा जाँदा त समाई पनि हाल्यो पाखुरामा र त्यहीँ भुइँमै सुतायो मोराले। त्यसपछि बाटो खुलेजस्तो भयो। प्रायजसो वनमा आउन थाल्यो, एकान्तमा। पछि झ्यालको बाटोबाट घरको कोठाभित्र पनि पस्न थाल्यो। टोक्थ्यो, चिथोर्थ्यो, चाट्थ्यो— के गर्थ्यो–गर्थ्यो प्रधानको छोरोले उसलाई, नशाले झैँ मात लगायो। ‘प्रधानको छोरो सहरमा पढेर आएको, सबै जानेको थियो त्यसले। बच्चा नहुने कुन्नि त्यसले कहाँ, के औषधि राख्थ्यो। कहिल्यै बच्चा हुने झन्झटमा पनि परिएन।’ — सोच्दासोच्दै वीरेकी स्वास्नीलाई पनि थक्कथक्क लाग्यो —‘धत्तेरी !’ ‘कति सामानहरू ल्याइदियो लोग्नेले मलाई —फरिया, चोलो, ओढ्ने। त्यस्तो माया गर्ने लोग्नेलाई पनि किन धोका दिएकी होला मैले? बिचरो! कत्ति खरिएर आएको होला सहरबाट। जे गर्छ गरोस्, केही भन्दिनँ म उसलाई।’ यस्तै सोचाइहरूमा भात पाक्यो, दाल पाक्यो, तरकारी पाक्यो। सधैँ ढिँडो र गुन्द्रुक पाक्ने चूलोमा आज एक्कासि भात, दाल पाक्यो—चूलोलाई पनि सायद गजब लाग्यो। दिनभरि उकालो चढेर आएको वीरबहादुरले त्यो छाक धेरै भात, दाल, तरकारी खायो। छ वर्षअघि आउँदा वीरेले ल्याएको मैन्टोल बूढीले भण्डारकोठाबाट झिकी। त्यो बाल्यो उसले। सधैँ टुकी र लालटिनको उज्यालो मात्र पाएको त्यो घर मैन्टोलको उज्यालोमा मुसुक्क मुस्कायो। घरधन्दा सकेर वीरेकी स्वास्नी सुत्ने कोठामा आउँदाखेरि वीरे मैन्टोलको उज्यालोमा खल्तीका कागतपत्रहरू हेर्दै थियो। “किन आजै हेर्नुपर्छ कागतहरू? थाक्नुभएको होला। सुते हुन्थ्यो नि !” स्वास्नीले भनी। वीरे एकपल्ट ऊतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्यो आत्मीयताले। झोलाको एउटा कुनाबाट केही नोटहरू निकालेर उसलाई दियो। “ल, यो तिमी राख। मन लागेका चीज किनेर खानू।” “आ, केलाई चाहिन्छ मलाई पैसा?” भन्दै लोग्नेसँग टाँसिएर बसी। ऊ टाँसिनु के थियो, वीरेलाई सनक चढिहाल्यो। उसले कागतपत्र र नोटलाई एकातिर राख्यो र स्वास्नीलाई अँगाल्यो। बल्ल एकान्त पाएका थिए यिनीहरूले। स्वास्नी पनि जे गर्छ गरोस् भन्ने पक्षमै थिई। डङ्ग्रङ्ङ ओछ्यानमा पल्टिदिई। वीरेले आफ्नो ओठ विस्तारै स्वास्नीको ओठतिर बढायो। राम्ररी चुठेकी रहिनछ क्यार, स्वास्नीको मुखबाट अघि खाएको तरकारीको गन्ध गएको रहेनछ। वीरेको ओठ म्वाइँ नै नखाई पर सर्‍यो। वीरेले खल्तीबाट अघिको सुनको सिक्री झिकेर स्वास्नीको घाँटीमा लगाइदियो। स्वास्नी त खुसीले पागल भई— “आबुइ! सुन पनि ल्याइदिया रहेछ!” “अब के त, एक्लै यत्रो घरव्यवहार, आमा, छोरा सम्हाली हेरविचार गरी बसिरहेकी छ्यौ। यति पनि नल्याइदिए त के के र! अरू कति साथीका स्वास्नीहरू त पोइल जान्छन्। थाहा छ? तिमी केवल मेरैनिम्ति जीवन धान्दै बसिरहिछ्यौ,” लोग्नेको यत्रो प्रेम देखेर स्वास्नी ग्लानिले पानी भई। सिक्री लगाइदिने निहुँमा वीरेले आफ्ना दुवै हात स्वास्नीको छातीमा लगेर थपक्क राख्यो। स्वास्नीलाई काउकुती लगाएजस्तो भएछ —फत्र्याक्फुत्रुक गर्दै हाँस्न थाली। स्वास्नीको यस्तो अभिनय मन पर्‍यो वीरेलाई। विस्तारै उसको चोलाका तुनाहरू फुकाल्न थाल्यो। आफ्नो ओठले स्वास्नीको ओठबाहेक अरू सबै ठाउँ —पेट, घाँटी, तिघ्रा, छाती —जताततै म्वाइँ खान थाल्यो। ओठमा म्वाइँ खाएन यस कारणले कि त्यहाँ तरकारीको गन्ध आउँथ्यो। यति नै खेर घरबाहिर अचानक कसैले सिटी बजाएको आवाज आयो। स्वास्नीलाई आफ्नो सर्वाङ्ग चिसो भएको अनुभव भयो। ‘यस्तो रातमा त प्रधानको छोरोले झ्याल खुलाउनका लागि सिटी बजाउँछ। झ्यालमुनि ढुकिरहेको हुनुपर्छ बजिया!’ आफ्नो लोग्नेतिर हेरी। स्वास्नीको नरम तिघ्रामा गाला जोडेर उसले आँखा चिम्लेको थियो। उत्तेजनाले उसको अनुहार रातो भएको थियो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १९, २०७५ ०३:४९